Ama-PUBG Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Onke ama-PUBG Hacks owadingayo, afana ne-Aimbot, iWall Hack, i-ESP, i-No Recoil, nokunye okuningi. Ngezici eziningi kunanoma yimuphi omunye umhlinzeki we-hack ezungeze, yilokho okusenza sibe ngunjiniyela ongcono kakhulu we-PUBG hacks online.
Usuyithengile iHack yilelo elaligqokwe yi-PUBG? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-PUBG hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma liseseku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-PUBG Hacks
Ama-PUBG Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Thenga I-PUBG Ama-Hacks angenile 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukungena kuwo, njengoba sinokukhetha okuningi lapha eGamepron.
Bheka i-hack evumelana nezidingo zakho kangcono futhi uthenge ukhiye womkhiqizo ngokufanele!
Zonke izinkokhelo ezenziwa lapha eGamepron zisingathwa yiprosesa yethu yokukhokha ephephe ngokumangazayo.
Finyelela Ukhiye Wakho & Landa ama-PUBG Hacks!
Lapho usuthengile ukufinyelela kukhiye womkhiqizo, ungayisebenzisa ukulanda ama-PUBG Hacks ethu ngokushesha.
Kungani Usebenzisa i-Gamepron PUBG Hacks?
Ngu Cooper Hollmaier - Kubuyekezwe u-Okthoba 14, 2021
Ngokukhishwa kwePatch 13.2, sibone ukubuyekezwa kokuqukethwe okuhle kakhulu kwePUBG, ngokufakwa kwezikhali zamanoveli njengeP90 SMG, engatholakala kuphela kumaphakeji okunakekela. Kanye ne-P90, ukuvuselelwa okusha kufaka iHyundai Porter, okuyiloli lokuthwebula elitholakala kuphela kumephu yomdlalo weTaego.
Ukuvuselelwa okungu-12.2 kwe-PUBG kufaka imephu entsha esethwe eSouth Korea eyaziwa ngeTago, futhi ngale mephu, onjiniyela bangeze emotweni efanelekile nangesikhali. Imodi yomdlalo we-Comeback BR ​​nayo ikhishwe ngalokhu kuvuselelwa, futhi ivumela abadlali ukuthi babuyele emdlalweni uma bebulawa kusenesikhathi ngokwanele emdlalweni.
Imephu elandelayo yePUBG izoba yiTaego, futhi igconwa ku-trailer ekhombisa ukuthi hlobo luni lwezici abadlali abangalindela ukuzibona lapho ekugcineni ikhipha. Okunye ukufakwa okuphawuleka kakhulu kulesi sibuyekezo kufaka phakathi izikhali ezinezihloko zaseKorea nezimoto ezibandakanya isibhamu sokuhlasela i-K2 kanye neHyundai.
Ukuvuselelwa kwe-PUBG 11.2 kugxile ekwengezeni iPassvivor Pass kulo mdlalo, kuqedile ngomjikelezo wayo wokuqala: I-Pajama Party. Njengoba uqagela egameni, izimonyo kulokhu kudlula konke kugxile kubuhle be-pajama. Lokhu bekungekho ukuphela kokufakwa kulesi sibuyekezo, kepha, njengoba kubuye kwaveza nezinguquko ezithile kumabhuloho e-Erangel.
I-PUBG ngumdlalo ozokwenza ukuthi uziqagele okwesibili, kepha ukusebenzisa i-PUBG Hacks yethu kuzoqinisekisa impumelelo yakho kuwo wonke umdlalo. I-Gamepron izinikele ekunikezeni abasebenzisi ulwazi olukhethekile olungeke lubavumele kuphela ukuthi bawine ukufana okuningi kwe-PUBG kepha futhi bajabulele nesikhathi sabo sokudlala umdlalo futhi. Uhloselwe ukuzijabulisa futhi uphumule ngenkathi udlala imidlalo yevidiyo, kepha kwesinye isikhathi ufuna ukuyisebenzisa njengendawo yokuncintisana futhi uvuleke - kulapho iPUBG Hacks yethu idlala khona, njengoba nabadlali abasha kakhulu besengafana nabo abadlali abanekhono futhi baphume ngokuwina.
Ngenkathi abanye bezokhombisa ukukhohlisa ngokukopela, kuzohlala kuneqembu labantu elenza noma yini edingekayo ukunqoba! Kuningi okufanele sikuhloniphe maqondana nokufuna ukuwina yonke imidlalo yakho, futhi noma ozakwenu kungenzeka ukuthi abazi, ukusebenzisa kwethu iPUBG Hacks kuzobasiza.
Izici ezitholakala ku-PUBG Hack yethu azinakuphindwa, futhi yize uzobona amanye ama-hacks amaningi athi enza into efanayo, akekho noyedwa kubo ozokwenza kanjalo ngezinga lekhwalithi ongayithola lapha eGamepron. Asizami ukukhipha ukukopela futhi siphendulele inzuzo eningi ngangokunokwenzeka ngoba ukube bekunjalo, besingeke sibe nenani elilinganiselwe lama-slots akhona kuma-hacks ethu! Sifuna kuphela abadlali bamageyimu abazinikele kakhulu ukuthi basebenzise ukukopela kwethu, ngoba siyazi ukuthi bangaba namandla kangakanani - uma ufuna ukuzinikela ekuwineni wonke umdlalo wePUBG onokwenzeka, ukuthenga ukhiye womkhiqizo nokulanda iPUBG Hack yethu indawo enhle ukuqala .
Ukusebenzisa i-PUBG ESP yethu kukuvumela ukuthi ugcine amathebhu ekunyakazeni kwesitha futhi uthole ukuthi balandela kuphi ngokulandelayo. Uma ungacabanga phambili futhi wazi ukuthi bazothatha muphi umzila, ungawashaya kuwo - kulapho-ke ushintshela khona kwi-PUBG Aimbot yethu bese ubaxoshela “endaweni yethunzi”.
I-PUBG Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-PUBG Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-PUBG Into ESP enezihlungi
PUBG izexwayiso zesitha
Imodi ye-PUBG super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
PUBG bone & aim key key okulungisekayo.
I-PUBG Buyisela isinxephezelo
Impela I-PUBG Hack Izici
Usebenzisa izibonelelo zethu ze-PUBG Hack ufinyelela ekukhetheni kwethu okukhethekile kwe-PUBG ESP, konke okukuvumela ukuthi uhlole ukunyakaza komphikisi wakho kalula.
Ngenkathi abahlinzeki abaningi be-hack bengeke bakunike okuningi osebenza nabo, sinezinketho ze-ESP njengamagama abadlali, imigoqo yezempilo, ngisho nebanga labo!
Into i-ESP ikuvumela ukuthi ubone izinsongo ngendlela yezikhali ezikhethekile, kanye neziqhumane nezinye izinto zokuhlunga ze-ESP ezitholakala ku-PUBG Hack yethu.
Labo abadubula ngokunemba okwedlulele bazophumelela, kulula lokho. Sebenzisa i-PUBG aimbot yethu ukwenza ugebhezi lomphikisi wakho lube ushizi waseSwitzerland!
IPUBG Bullet track (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Ukulandelela izinhlamvu ukuthola umbono ocacile womphikisi wakho kuhlala kulungile ezimweni ezimfushane / zamabanga aphakathi, yingakho sikufake ku-PUBG Hack yethu.
Ugula ngokudutshulwa ngemuva? Kuyinkinga sonke esibhekana nayo, futhi eyodwa ungagwema ukusebenzisa isici sethu Sesexwayiso.
Imodi ye-PUBG super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Imodi Ye-Super Jump ibeka izinto ngombono, njengoba kwesinye isikhathi kufanele wenze noma yini edingekayo ukuze unqobe. Akukho monakalo wokuwa osindisa impilo kumdlalo ofana ne-PUBG!
PUBG bone & aim ukhiye okulungisekayo
I-PUBG Aimbot yethu ifakwe ukubekwa phambili kwamathambo nezinye izinketho eziningi ezilungisekayo, ikunikeze umuzwa wokugenca ngokwezifiso noma kunini lapho ungathanda.
I-PUBG aimbot amasheke abonakalayo
Ukuhlolwa okubonakalayo kuhlale kukuhle uma kukhulunywa nge-PUBG aimbot, njengoba uzokwazi ukuthi izitha zishesha kangakanani! Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla.
Ukususwa kokubuyiselwa kanye nesinxephezelo kuyatholakala ngaphakathi kwePUBG Hack yethu, esinye futhi isizathu esenza ukuthi abadlali abaningi babeke ukholo lwabo kuGamepron.
Iba isidlali esihamba phambili sePUBG ngeGamepron
Kukangaki uzithola uhleli ezansi kwebhodi yabaphambili ngemuva kokuphela komdlalo? AmaGamers emhlabeni wonke azwile ukuluma okubukhali kokuphoxeka okuza ngokulahlekelwa ngumdlalo wePUBG, ikakhulukazi uma ukulo mbuthano wokugcina futhi ihembe lakho limanzi te ngomjuluko. I-Gamepron ishintsha umdlalo, isigebengu esisodwa ngasikhathi, futhi sekuyisikhathi sokunquma ukuthi ukuluphi uhlangothi.
Ama-PUBG Hacks adumile futhi aphambe
IPUBG ESP neWallhack
Amanye ama-PUBG Hacks nokukhohlisa
Ama-PUBG Hacks nama-Cheats anika ngisho nabadlali be-novice ithuba lokuncintisana nama- "try-hards". Akunamahloni ngokuba muhle emdlalweni wakho owuthandayo, ngakho-ke ukukhuluma kabi labo abahlakulele amakhono abo njalo akukaze kube kuhle - yize njengabaduni, sizothatha umzila olula ukuya phezulu okungenzeka. Kungani ungazihlupha ngenkinga yokuzama ukujuluka wonke umdlalo wePUBG owodwa, lapho ungavele uvule ama-PUBG hacks wethu ubuke ama-bots akwenzele konke?
Ukunqoba umgomo wokugcina wokuwufinyelela njengomdlali we-PUBG, yingakho i-PUBG Hack yethu ithandwe kakhulu. Abekho abanye abahlinzeki ngaphandle lapho abaletha le mfanelo ye-PUBG Hack, ingasaphathwa eyabathuthukisi abangafaka lezi zici eziningi ngaphakathi kwethuluzi labo! Ama-PUBG Hacks athandwa kakhulu atholakala ku-inthanethi azobonakala engenamsebenzi uma kuqhathaniswa namathuluzi atholakalayo lapha ku-Gamepron, futhi ungawathola wonke ngentengo eyodwa ephansi.
Cabanga ukuthi ukunemba kwakho kukushiye kangaki ngesikhathi esinqabile, njengoba ukuphela kwabantu abasele embuthanweni wokugcina kuzoba yilabo abakufanele kakhulu (ngabagadli abambalwa abaphonswe enhlanganisweni). Lapho wazi ukuthi umbuthano wokugcina uzogcwaliswa ngabadlali abanamakhono, okuwukuphela kwithuba onalo ukulidubula - ukulwa ngezibhamu ePUBG kufanele kube yisici esibaluleke kakhulu somdlalo. Uma ungeke unqobe isibhamu, ngeke ube nempumelelo enkulu; okungako siqinisekile ngakho! Lapho ufuna ukwazi ukuthi izinhlamvu zakho zinezinhloso ezibulalayo ngazo zonke izinhlamvu, ukusebenzisa i-PUBG aimbot yethu kuzoba ukubheja kwakho okuhle kakhulu.
Ngezici ezinjenge-Bone Prioritization ne-Auto-Aim / Fire, abaphikisi bakho bazozilimaza ngokwabo lapho bebona igama lakho ku-feed feed. Asikho isikhathi sokucabanga kumdlalo ofana ne-PUBG, ngakho-ke ukunemba ozokudlala ngenkathi usebenzisa i-PUBG aimbot yethu kuzoshintsha ngokuphelele indlela odlala ngayo.
Imidlalo yevidiyo yakhelwe ukuklomelisa labo abadlale isikhathi eside futhi baqonde umqondo womdlalo, kepha akunandaba ukuthi ubusudlala isikhathi esingakanani iPUBG lapho iPUBG ESP yethu neWallhack yenziwe yasebenza. Uzohlala wazi ukuthi isitha sizama ukukusethela ukuqamekela, njengoba ungasebenzisa "umbono wakho we-x-ray" ukubona cishe noma yini - izindawo ezi-opaque neziqinile azifani nokuthandwa yi-PUBG ESP yethu .
Ungabona zonke izinhlobo zezinto uma unikwe lesi sici amandla, njengegama lezitha ngisho nokuthi basele nempilo engakanani! Lokhu kumane nje kuyisiqalo, njengoba izihlungi zezinto nezinye izinketho ze-ESP njengezikhali neziqhumane zitholakala nakokugenca kwethu kwe-PUBG. Asigcinanga nje ngokushaya ngempama ndawonye ithuluzi eliqukethe kuphela i-aimbot esezingeni eliphansi kanye nokugenca odongeni okusilelayo, sikhiphe izibhamu ezinkulu zalesi (akukho pun ehlosiwe!).
Landelela izitha zakho ngesici sethu se-Footprint, esisebenza njengoba igama lingasikisela. Uzokwazi ukulandelela izitha zakho ngokulandela izinyathelo ezenziwa yi-hack yethu; ungavumela futhi isici se-Damage ephezulu futhi uqoqe ukubulala ngendlela engokwemvelo. Ama-hacks ebanga alusizo ikakhulukazi kumdlalo ofana ne-PUBG, njengoba ungazi ukuthi isitha sizokuza nini ngemuva! Njengoba kunikwe amandla i-Distance Hack, ungahlala ubona ukuthi isitha sisondele kangakanani endaweni yakho - okuwukuphela kwesikhathi lapho umuntu ezosondela khona, kulapho ufuna basondele khona.
Ukubhekana nomonakalo omningi kunenzuzo ngezizathu ezimbalwa ezisobala, okokuqala ukuthi izitha zakho azingeni kunoma yiziphi ezinye zezibhamu zakho onqenqemeni. Uzobamba iqhaza kuyo yonke impi eyenzekayo, futhi kwesinye isikhathi lokho kukodwa kunganela ukuqinisekisa ukunqoba kwakho.
Uma ungaqiniseki ngokuphelele ukuthi yini oyifunayo ku-hack ye-PUBG, yazi nje ukuthi i-Gamepron inakho konke okudingayo. Kudala sakha ama-hacks ngokomsebenzi, futhi eminyakeni edlule sikwazile ukwakha uhlelo olusivumela ukuthi sikhiphe ama-cheats asezingeni eliphakeme kakhulu. Ufuna ukuba nethuba kumdlalo ofana ne-PUBG, kepha umuntu ojwayelekile akanaso isikhathi esanele sokucija amakhono abo futhi adlale njalo.
Noma ngabe uzama ukunyathela abantu noma ukhathele ngokweqiniso ukulahlekelwa iningi lemidlalo yakho ye-PUBG, ungathembela kithi lapha eGamepron ukukuyisa ezweni elithenjisiwe. Kungani uchitha sonke leso sikhathi uzijwayeza ukuzijwayeza lapho ungavele uthenge okhiye bethu bomkhiqizo bese uqhudelana nabadlali abahamba phambili emhlabeni? Ungawadla wonke amadina enkukhu ongawathanda uma unikwe amandla i-Gamepron PUBG Hack, ngakho-ke unganqikazi - thenga ukhiye womkhiqizo bese uqala namhlanje.
Ama-PUBG Hacks Imibuzo
Kungani ama-PUBG Hacks ethu
Ama-PUBG Hacks ethu ahlukile, njenge-cliche njengoba lokho kungazwakala. Awunikezwa nje ukufinyelela kwamanye ama-hack-tier hacks lapho ukhetha ukukopela nge-Gamepron, njengoba uzosebenza ngamathuluzi akhethekile
zitholakala kuphela kwinani elilinganiselwe labasebenzisi. Abanye onjiniyela be-hack bangakhipha ama-hacks asezingeni eliphansi, kepha sihlala sigxila ekuletheni ithuluzi elithembekile etafuleni.
Kungani iPUBG Aimbot yethu
I-aimbot eyi-PUBG efanele izokuwinela imidlalo ngokushesha, njengoba uzokwazi ukudubula ngokunemba ukwedlula noma yimuphi omunye umdlali endaweni yakho yokubungaza. Kunabantu abambalwa kakhulu eMhlabeni abangasho ukuthi banokunemba kwerobhothi ngaphandle kosizo lwamathuluzi, ngiyabonga ukuthi uwuhlobo lomuntu onganaki ukukopela ukuze uqhubeke (kwesokudla?).
Kungani iPUBG ESP yethu
Ukusebenzisa i-PUBG ESP kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokugcina amathebhu kusitha sakho, ngoba azikwazi ukufihla lapho ubona ngqo ezindaweni eziqinile nezikhanyayo. Uzokwazi ukubona amagama abadlali, nokuthi banempilo engakanani abasele nokuthi yiziphi izikhali abazisebenzisayo - uma lokho kungalona ulwazi olwanele, kunezinye izinketho eziningi ze-ESP ongakhetha kuzo .
Kungani iPUBG Wall Hack yethu
IWall Hack yethu ayitholakali ngokuphelele futhi ikuvumela ukuthi ube namandla ngaphandle kokubeka i-akhawunti yakho engcupheni. Isikrini asiminyene nemininingwane engahleliwe lapho uvule i-PUBG Wall Hack yethu, njengoba konke okubonayo kuzoba wusizo - I-Gamepron ikunika konke okudingekayo ukuze unqobe!
Kungani iPUBG Norecoil yethu
I-PUBG ngumdlalo ongathetheleli kakhulu, okusho ukuthi uzozithola umemeza esikrinini ngenxa yokuphazamiseka okuncane kakhulu. Uma sekushiwo lokho, ukubuyela emuva kungukuphazamiseka okukhulu, kepha futhi ungakususa ngenkathi usebenzisa iPUBG Hack yethu. Noma i-aimbot inikwe amandla isibhamu sakho sizohlala sinembile futhi sikwazi ukukhipha abadlali abanekhono kakhulu endaweni yakho yokwamukela izivakashi.
Ungalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-PUBG?
Sikunikeza ukufinyelela kuma-hacks ethu ngokusebenzisa okhiye bomkhiqizo, konke okukuvumela ukuthi usebenzise indawo ekhethekile ye-Gamepron yemidlalo oyithandayo. Ama-PUBG Hacks ethu angalandwa ngokushesha ngemuva kokuthi uthenge futhi wenza kusebenze ukhiye wakho womkhiqizo, noma ngabe ukhethe siphi isikhathi.
Kungani ama-PUBG hacks wakho abiza kakhulu kunamanye
Ama-PUBG Hacks ethu awatholakali ngokuphelele, okusho ukuthi i-akhawunti yakho ngeke ibe sengcupheni ngenkathi ukopela. Abahlinzeki abaningi bazothi banokuvikelwa kokukopela futhi ugcina ngokuvinjelwa noma kunjalo, kepha sinikela ngokweqile ukukopela okungatholakali okungu-100%. Hhayi lokho kuphela, kepha ukukopela kwethu kuyatholakala kuphela.
Sinezinkinobho zomkhiqizo ezifanele wonke umuntu! Noma ngabe ufuna ukhiye wansuku zonke, wamasonto onke, noma wanyanga zonke, singakusiza ukukusiza ngokusemandleni ethu. Asifuni ukukhawulela abasebenzisi bethu futhi yingakho sigcina izinto ziguquguquka, sikuvumela ukuthi uthenge ukufinyelela ngesikhathi esinqunyiwe sokukhetha kwakho.
Awesome I-PUBG Hack Izici